LUNGISA IWINDOWS AYINAKUNXIBELELANA NESIXHOBO OKANYE ISIXHOBO (ISEVA YEDNS ESISISEKO) - KWENZIWA KANJANI
Lungisa iWindows ayinakunxibelelana nesixhobo okanye isixhobo (Iseva yeDNS esisiseko)
Ukufumana Akukho ukufikelela kwi-Intanethi, ukuFikelela kumaphepha eWebhu, kunye nokuqhuba iziphumo zenethiwekhi yesiXhobo seNgxaki IiWindows azikwazi ukunxibelelana nesixhobo okanye isixhobo (Iseva yeDNS esisiseko). Oko kuthetha ukuba ikhompyuter yakho ayikwazi ukuqhagamshela kwiseva esisiseko ye-DNS esetwe ngumboneleli wakho wenkonzo ye-intanethi. Ebangele ngenxa yezizathu ezahlukeneyo ezifana ne IPv4 yakho okanye izicwangciso ze IPv6 zingamiselwanga ngokufanelekileyo, usebenzisa iseva engummeli, ungquzulwano nezicwangciso zenethiwekhi, okanye xa umncedisi we DNS ozama ukufikelela kuwo engafumanekiyo okwethutyana nangaphezulu. Nokuba siyintoni na isizathu, apha siqokelele ezona zisombululo zisebenzayo zokulungisa ayikwazi ukuqhagamshela kwiseva ye-DNS windows 10.
IiWindows azikwazi ukunxibelelana nesixhobo okanye isixhobo
Ixhaswe yi-10 Unboxing SKG V7 Smart Watch enegazi le-Oxygen yokulala kunye ne-24/7 yeMonitor yeNtliziyo yeNtliziyo Yabelana Ngokuhlala Okulandelayo
Qaphela: izisombululo ezingezantsi zisebenza kwiikhompyuter, iilaptops, iidesktop, kunye neetafile ezisebenza Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 operating systems. Isebenza kubo bonke abavelisi abakhulu beekhompyuter (iDell, HP, Acer, Asus, Toshiba, Lenovo, Samsung).
Nanini na xa ujongene nayo nayiphi na inethiwekhi kunye ne-Intanethi, iingxaki ezinxulumene nazo, into yokuqala esiyincomayo qala kwakhona iPC yakho kuquka izixhobo zenethiwekhi (I-Router, Tshintshela, kunye nemodem ukuba iqhagamshelwe) elungisa ukuba kukho i-gitch yethutyana ebangela umba.
Okwexeshana Khubaza isoftware yokhuseleko (Antivirus) VPN ukuba ifakiwe kwaye iqwalaselwe.
Yenza i-boot ecocekileyo ukujonga kwaye uqinisekise ukuba nayiphi na impixano yomntu wesithathu ayibangeli mcimbi.
Sebenzisa iSixokelelwano sasimahla esifana neCcleaner ukucoca inkunkuma, iifayile zeTemp, i-cache yesikhangeli, iikuki kunye nokulungisa amangeniso obhaliso aphukileyo.
Kwakhona vula umyalelo womyalelo njengomlawuli, chwetheza ipconfig /flushdns kwaye ngenisa iqhosha. Qala kwakhona iiWindows kwaye ujonge ngoku uqhagamshelo lwe-Intanethi luqalile ukusebenza.
Guqula useto lweadaptha yakho
Ukuba umba usaqhubeka, makhe sizame ukutshintsha inethiwekhi/useto lweadaptha yeWiFi:
Cinezela Windows + R, uhlobo ncpa.cpl kwaye kulungile
Isikrini soNxibelelwano lweNethiwekhi siya kuvula.
Fumana inethiwekhi yakho yangoku kwaye ucofe ekunene kuyo.
Khetha iinkcazelo ngeempawu kwimenyu eyehlayo.
Yiya kwi-Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Cofa kwi Iimpahla iqhosha.
Kanye kwi-General tab, khetha Fumana idilesi ye-IP ngokuzenzekelayo kwaye Fumana idilesi yeseva ye-DNS ngokuzenzekelayo.
Cofa u-Kulungile ukuze utshintsho lusebenze.
Emva kokutshintsha useto, qala kwakhona iPC yakho kwaye ujonge ukuba umba usonjululwe na.
Tshintshela kwiGoogle Public DNS
Ukuba olu khetho lungasentla aluwusombululi umba, zama ukusebenzisa i-google public DNS endaweni yedilesi yeseva ye-DNS enokuthi ilungise ingxaki. Ukwenza oku
Kwakhona vula i-Network yoqhagamshelo ifestile usebenzisa ncpa.cpl umyalelo.
Cofa ekunene kumsebenzi womnatha osebenzayo, Khetha iiPropati.
Khetha Sebenzisa ezi dilesi zilandelayo zeseva ye-DNS iqhosha lerediyo.
Cwangcisa umncedisi weDNS oKhethekileyo kwi-8.8.8.8.
Kwaye i-Alternet DNS iseva ukuya ku-8.8.4.4
Cofa u-Kulungile ukugcina utshintsho lwakho.
Ngoku qalisa iPC yakho kwaye ujonge uqhagamshelo lwakho lwe-Intanethi.
Seta kwakhona i-Winsock kunye ne-TCP / IP Configuration
Ukuba akukho nanye iindlela zangaphambili ezikuncedileyo, zama ukuseta kwakhona iWinsock kunye neTCP/IP uqwalaselo:
Vula i inguqulelo ephezulu yomyalelo wakho wokukhawuleza .
Chwetheza le miyalelo ingezantsi kwaye uqinisekise ukuba ucofa u-Enter emva kwayo nganye:
Uhlobo ukusetha kwakhona kwe-netsh winsock kwaye cinezela Ngena.
Uhlobo netsh int ip ukusetha kwakhona kwaye cinezela Ngena.
Uhlobo ipconfig /khulula kwaye cinezela Ngena.
Uhlobo ipconfig /hlaziya kwaye cinezela Ngena.
Uhlobo ipconfig /flushdns kwaye cinezela Ngena.
Emva kohlobo lokuphuma ukuvala umyalelo womyalelo, kwaye uqalise kwakhona iWindows.
Vula isikhangeli sewebhu kwaye ujonge uqhagamshelo lwe-Intanethi luqalisile ukusebenza.
Phinda ufake iadaptha yeNethiwekhi
Kwakhona iphelelwe lixesha, abaqhubi be-adaptha yenethiwekhi engahambelaniyo nayo ibangela ukuba ingxaki isilele ukunxibelelana nesixhobo okanye uvimba Sicebisa uhlaziyo okanye Faka kwakhona umqhubi wenethiwekhi ngoguqulelo lwamva nje lokwenza oku. Kuba iPC yakho ayinalo uqhagamshelo lwe-intanethi olusebenzayo lokukhuphela kwi-intanethi kunye nokuhlaziya umqhubi weadaptha yenethiwekhi Yenza ukhetho lokuFakela kwakhona.
Cinezela Windows + R, uhlobo devmgmt.msc kwaye kulungile
Yandisa iadaptha yothungelwano,
Cofa ekunene kumqhubi ofakiweyo khetha Khipha isiXhobo.
Cofa ewe ukuba ucela isiqinisekiso
Qala kwakhona iiWindows ukuze ukhuphe ngokupheleleyo umqhubi
Uninzi lwexesha ekuqaliseni kwakhona iWindows ngokuzenzekelayo faka ukwakhiwa kumqhubi weNethiwekhi
Ukuba iWindows iyasilela ukuhlohla, emva koko vula uMphathi weSixhobo, Isenzo kwaye ukhethe Skena utshintsho lwehardware.
Okanye kwikhompyuter eyahlukileyo, Khuphela umqhubi we-Adapter yeNethiwekhi yamva nje yePC yakho. Khuphela okufanayo kwaye usebenzise setup.exe ukufaka ngesandla umqhubi. Qala kwakhona iPC kwaye ujonge uqhagamshelo lwe-Intanethi luqalile ukusebenza.
Ngaba ezi zisombululo zanceda ukulungisa iWindows ayinakunxibelelana nesixhobo okanye isixhobo ?sazise kwizimvo ezingezantsi, kwakhona Funda Isicelo asikwazanga ukuqalisa ngokuchanekileyo (0xc000007b) windows 10